Talooyin Ku Faa'idaysta Muuqaalka laga bilaabo Khabiirka Cimilada
Sawirada aan la fileynin waxay horseedi karaan cawaaqib culus oo la xidhiidha waxqabadka website-ka. Xaaladaha intooda badan marka xawaaraha boggaagu yahay mid aad u gaabis ah, "sawirada aan la duubin" ayaa ku leh qaybta ugu weyn ee eedda. Dunigeena hadda waxaa lagu gartaa tartan-goo-gaabis ku dhowaad dhammaan warshadaha. Taasina waa sababta websaydhka qunyar-socodka ah uusan u noolaan Karin kuleylka - mikrotik ping.
Jason Adler, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Sare Maamulaha Guusha Macaamiisha, ayaa ka digay in haddii user uu booqdo goobtaada oo uu dareemo in uu qaadanayo hal ilbiriqsiyo ka badan intii isaga / iyada loo adeegsanayo, waxay u badan tahay in ay boodi doonaan si aad u hesho website-kaaga tartanka haddii uu si dhakhso ah u socdo.
Sidee u hubisaa in sawiradaadu aysan hoos u dhigin goobtaada?
Ka fikir inaad isticmaashid isticmaalka todobada sawir oo wax lagu fududeeyo si aad u hagaajiso SEO:
1. Isticmaal sawirada tayo sare leh ee asalka ah
Tani waa xaqiiqo asaasi ah oo quseeya dhammaan noocyada bogga internetka. Waxaad ubaahan tahay sawirada ugu caansan iyo asalka dhabta ah ee boggaaga haddii aad rabto inaad bixiso waayo-aragnimo aad u fiican. Haddii aad sawirro ku qaadan karto kamarad tayo fiican leh ama aad naqshad sameyso oo abuuri karta sawirro asalka ah, si aad u wanaagsan u dhigto goobtaada waa inay noqotaa mid sareeya.
Diidmada isticmaalka sawirada sawirada waxay noqon kartaa mid aad u sareysa. Si kastaba ha ahaatee, dhab ahaantii ma rabto inaad haysato sawir in malaayiin goobood oo kale ay leeyihiin.
2. Hagaajinta sawirradaada qalabka
Isticmaalayaasha sida sawirada aan ahayn kaliya rafcaan laakiin sidoo kale shakhsiyadeed. Qalabka wax lagu sawirayo ayaa aad u baahsan oo dhan internetka. Mar walba waxaad heli kartaa qalab kugu habboon oo aad ku dari karto sawiradaada kahor intaadan soo dhajin internetka.
Haddii aad rabto inaad ku darto qoraalka, midnimada, shakhsiyadda ama aad u baahan tahay inaad xoojiso racfaankeeda, waxaa jira qalab loogu talagalay. Samee isticmaalka qalabka wax lagu sawiro ee sawirada si aad u abuurto muuqaalo muujinaya oo ku siiya boggaaga
3. Magacyada faylasha iyo tifaftirka muhiimka ah
Tababarka ugu wanaagsan ee SEO wuxuu xooga saarayaa muhiimada ah in la dhexgeliyo ereyada muhiimka ah ee magacyada faylasha lagu sharaxayo sawirka. Magaca faylka noocan ah wuxuu ku wargeliyaa 'style = "text-decoration: none; xadka hoose-hoose: 1px adag; href = "https: // sifo.."Mashiinka raadinta ee ku saabsan sawirka iyo waxa ku dhex jira. Markaad soo dejiso sawirada, beddel magaca magacaaga oo leh midka sharaxaya sawirka sida ugu macquulsan.
4. Yaree xajmiga sawiradaada
Waxaad yareyn kartaa cabirka faylka adiga oo aan hoos u dhigin tayada sawirka. Adiga oo dib u qaabeynaya oo ku dhejinaya sawirada, waxaad si weyn u horumarin kartaa xawaaraha goobta.
Isticmaal bogga "Kaydinta loogu talagalay Web" ee Adobe Photoshop si loo hubiyo in sawirada ku yaala website-kaaga ay yihiin kuwo si mug leh u habboon.
5. Isticmaal habka faylka saxda ah
Waxaa jira saddex nooc oo muuqaalka muuqaalka ah: JPEG, PNG, iyo GIF.
JPEG waa qaabka ugu caansan maxaa yeelay waxay haysaa sawirada yar yar. GIF badanaa waxaa loo isticmaalaa muraayadaha iyo farshaxanka fudud. Waxay taageertaa asalka hufan oo sidaas darteed waa ku fiican yahay shirkadaha shirkadaha iyo waxyaabaha kale ee bogga. PNG waa hab kale oo casriga casriga ah ee JPEG iyo GIF. Habkani wuxuu taageertaa daahfurnaanta, wuxuu leeyahay nidaam gaaban oo sax ah, iyo midabyo badan oo midabyo leh
6. Kobcinayaan sawirrada qoraalka iyo cinwaanka
Qoraalka hoose iyo cinwaanka image waa in si habboon loo abuuraa si looga caawiyo boggaaga inuu ku guuleysto darajo heer sare ah SERPs oo sameeya khibrad user wanaagsan.
Qoraalka hoose waxaa laga yaabaa inuu yahay habka ugu wanaagsan ee lagu hubiyo in alaabtaadu ay ka muuqato shabakadda Google iyo raadinta sawirada
7. Abuuraan sawirrada cinwaanada goobtaada
In la yareeyo sawirada loogu talagalay SEO waa hubaal dadaalka. Goobtaadu si dhakhso ah ayay u shaqeysaa, dadka soo booqdaana waxay heli karaan waxay rabaan si dhakhso ah Websaydhada qulqulaya waxay la kulmaan lumitaanka muuqaalka, hoos u dhaca qiimaha isbeddelka iyo iibka iyo dakhliga. Talooyinka kor ku xusan waxay kaa caawin doonaan inaad iska ilaaliso khasaarahan